WordPress: Araho amin'ny Google Analytics ny fikarohana amin'ny tranokala
Alahady, Novambra 4, 2007 Alarobia, Aprily 1, 2015 Douglas Karr
Google Analytics dia manana fiasa mahafinaritra, ny fahaizana manara-maso ny fikarohana anatiny ao amin'ny tranokalanao. Raha manana bilaogy WordPress ianao, dia misy fomba tsotra iray amboary ny Fikarohana tranokala Google Analytics:
Safidio ao amin'ny Google Analytics ny tranokalanao ary kitiho ny Edit.
Mizotra mankany amin'ny fijery tianao hametrahana Fikarohana tranokala.
Tsindrio View Settings.
Eo ambanin'ny fikirakirana fikarohana ao amin'ny tranokala, apetraho amin'ny ON ny fanarahana ny fikarohana ny tranokala.
Ao amin'ny saha Parameter Query, ampidiro ny teny na teny izay manondro ny parèquement parquement interne, toy ny "term, search, query". Indraindray dia litera fotsiny ny teny, toy ny "s" na "q". (WordPress dia "s") Ampidiro ny masontsivana dimy, nosarahan'ny koma.
Safidio na tianao ny Google Analytics hanaisotra ny masontsivana fangatahana ao amin'ny URL anao. Ny masontsivana nomenao ihany no esorinao, fa tsy ny masontsivana hafa amin'ny URL iray ihany.
Safidio na mampiasa sokajy ianao na tsia, toy ny menus drop-down hanatsarana ny fikarohana tranokala.
Tags: Fikarohana tranokala google analyticsfikarohana amin'ny tranokala googletranonkala fikarohanafitadiavana wordpress
Herd Succumbs amin'ny teoria azy manokana
5 Nov 2007 amin'ny 2:31 maraina
Misaotra amin'ny tendrony, ampiharina fotsiny!
5 Nov 2007 tamin'ny 12:44 PM
Tsara, Doug! Tsy fantatro hoe misy io.
11 Aogositra 2010 amin'ny 12:05 PM
Misaotra amin'ny Soso-kevitra! Nametraka an'io aho andro vitsy lasa izay ary tsy azoko antoka ny parm de recherche ary nanontany tena aho hoe maninona no mbola tsy nitaterany. Samy niresaka ireo olana roa ireo ianao!
8 Okt 2011 amin'ny 7:57 PM
Misaotra betsaka noho ny fampahalalana, nataoko izany! 🙂
Misy ihany koa ny plugin SiteMeter, azonao ampiasaina hahitanao hoe inona ny teny lakile ary impiry no efa notadiavina tao amin'ny bilaoginao